Home > W-Controller
ဂိုဒေါင်ထဲက ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်တွေကို စစ်ဆေးတဲ့ အပိုင်းမှာ အခက်အခဲရှိနေလား?
ကုန်ပစ္စည်း အဝင် အထွက် စာရင်းတွေ ကွဲလွဲနေလား?
ဒီလိုပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့နေပြီ ဆိုရင်တော့…W-Controller ကိုသုံးဖို့လိုနေပြီနော်…
W-Controller ဆိုတာကတော့ အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အဝင်အထွက်၊ သိုလှောင်မှုတွေကို ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ အလွယ်တကူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် Mobile System Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Cloud-Based System တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိတ်ဆွေတို့လုပ်ငန်းရဲ့ အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ သိမ်းထားနိုင်ပြီး အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Phone/ Tablet တွေနဲ့ ပြန်ပြီး စစ်ဆေးမှာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
W-Controller ကဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လဲဆိုရင်…
ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိနိုင်ခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းတွေကို Block တစ်ခုချင်းအလိုက် သိမ်းထားနိုင်ခြင်း
manage expired product
ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်တွေကို သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး အလွယ်တကူ ပြန်သိနိုင်ခြင်း
ကုန်ပစ္စည်း အဝင်အထွက် ပစ္စည်းစာရင်းများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
Mobile Application ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး မိတ်ဆွေတို့ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှု စာရင်း၊ အခြေအနေတွေကို Phone/Tablet များမှ တိုက်ရိုက် သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေမှာ အရေးကြီး အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ လက်ရှိကုန်ပစ္စည်း အရေအတွက်၊ သက်တမ်းကုန်တော့မယ် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အဝင်အထွက်စာရင်းတွေကို အကောင်းဆုံးစီမံနိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် W-Controller က အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Management ပိုင်းမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ W-Controller System ကိုသုံးပြီး တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊ ပြဿနာတွေကို အချိန်တို အတွင်းဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း နဲ့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက် Report ထုတ်နိုင်ခြင်း စတဲ့ အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။